I-Love Monster-iprojekthi yokuqala ye-XRPL iya kuhlala kuyo Klever Isipaji kunye ne-Ecosystem | Klever ezezimali
I-Love Monster-iprojekthi yokuqala ye-XRPL iya kuhlala kuyo Klever Isipaji kunye ne-Ecosystem
The Klever I-Ecosystem yamkela iiprojekthi ze-XRPL, i-xLoveMonster kunye noluntu oluphuhlisayo
I-XRP Ledger i-scalable, i-blockchain ezinzileyo kunye noluntu olomeleleyo lwabaphuhlisi behlabathi. Ngokukhululeka kwayo ekuphuhliseni, iindleko zentengiselwano eziphantsi, kunye noluntu olunolwazi, inika abaphuhlisi isiseko esiqinileyo somthombo ovulekileyo wokujongana neeprojekthi ezinzima kakhulu - ngaphandle kokulimaza indalo.
Sibambisene ne-LoveMonster ukuxhasa uphawu lwabo lwe-xLoveMonster, iprojekthi yokuqala ye-XRPL ukujoyina Klever Inkqubo yendalo.
Le yenye nje kwiindawo ezininzi zokudlala ze-blockchain kunye neeprojekthi ezilungelelanisiweyo ukuze zixhamle Klever te knoloji.
Iimpawu ezintsha ngaphakathi Klever yiprojekti ziquka:
xLoveMonster Thumela / Fumana / Gcina kwaye uyeza kungekudala: Ukuthenga & Ukuthengisa
yonke imigangatho Klever Ukusebenza kweWallet
Njengomdlali we-Love Monster, uya kufumana amalungelo akubeka ngenzuzo yokhuphiswano kwibala lokudlala. Kuyo yonke iMonster yoLuthando, kukho amanqaku okuqala ali-10 afumanekayo ukuba ahlulwe phakathi kwezakhono eziphambili ze-5: Uthando lweStreak, Amandla, isantya, i-Agility & Rarity. Ungadlala ngeendlela ezahlukeneyo zomdlalo ezifana ne-1v1/2v2/5v5 amadabi, i-Love Monster Tournaments, imidlalo ye-Arcade, kunye nokuphonononga i-metaverse engachazwanga eyaziwa ngokuba yi "Monster Planet" njengoko uqhubela phambili kumanqanaba akho kunye nenqanaba leMonster Monsters.
I-Love Streak ilinganisa indlela enenkathalo kunye nothando ngayo i-monster yakho. Enye yezinto esinqwenela ukuba nazo sonke ngamandla okwenyani- ezinye izilo ezikhulu zomelele kunezinye, kodwa oko akuthethi ukuba abona banamandla baya koyisa! Kukho izilo ezihamba ngokucothayo kodwa ziphumelele ngamandla okanye ngokunqabileyo-nto leyo elawulwa ngumdlali. Ngobuchule, umdlali unokuphepha ukuhlaselwa okuthile. Kumjikelo ngamnye, abanini bakhetha indlela abafuna ukudlala ngayo, kodwa banokusebenzisa isakhono esinye kumjikelo ngamnye.
Ezinye zezinto eziphambili eziza kumdlalo we-Love Monster ziquka:
Dlala 2 Zuza
Dlala ukuze ufumane uguquko kwi-ecosystem ye-Love Monster. Dlala amadabi e-PvP ngokuchasene nabasebenzisi kwihlabathi liphela kwaye uzuze kunye nezilo zakho.
Indawo yeMarike yeMonster
Indawo yethu yentengiso ivumela abaqulunqi kunye nabaphuhlisi ukuba benze iimveliso kunye nezixhobo ezinokuthengiswa ngaphakathi kwenkqubo yethu yendalo ukuze bafumane umvuzo oyintsalela.
Oyena ndoqo wombono wethu kukudala intsebenziswano noluntu olubandakanyayo. Ngokusebenzisa i-loop yengxelo, amalungu asekuhlaleni aqhuba uphuhliso lwemveliso kunye nezinto zekamva zendlela.
Ibala lokulwa lamkela abadlali abanomhlaba, izibonelelo, kunye namandla-ups ukomeleza amava abo okudlala.
Ukwenza izinto zibe mnandi ngakumbi, "Klever Umhlaba” uphuhliswe ngokupheleleyo eLove Monster. Ilungile lo nto, Klever iya kuba nemeko yayo yedabi onokuthi uyiphonononge kwiMarike yeMonster.
Ukuthenga iithokheni ze-xLoveMonster nceda undwendwele www.mylovemonster.com/presale
Iinkcukacha ezithe kratya ziyafumaneka kwi www.mylovemonster.com
Akukho kalo 4.73 Iivoti: 37